Inona ny inverter ankehitriny ary inona izany | Green Renewable
Inona ny inverter ankehitriny ary inona no ilana azy?
Raha apetrakao ny takelakao masoandro dia ho fantatrao fa mila fitaovana maromaro ianao mba hiasa tsara ny zava-drehetra. Tsy vitan'ny fametrahana panneaux solaires fotsiny sy fiandrasana ny tara-pahazavana vao hanao ny asa sisa. Mba hahafahan'ny herinaratra mandeha tsara dia mila mpanova herinaratra ianao, ankoatry ny zavatra hafa.
Te hahafantatra ve ianao hoe inverter ankehitriny, ahoana ny fametrahana azy ary inona izany?
1 Inverter herinaratra amin'ny rafitra angovo avy amin'ny masoandro
2 Inverter inona no tokony hampiasaina?
3 Niova onja sy inverter onja onja
4 Firy ny mpamatsy vola ilaiko ao an-tranoko?
5 Parehitra ifotony
Inverter herinaratra amin'ny rafitra angovo avy amin'ny masoandro
Ny inverter herinaratra dia ampiasaina hanovana ny herinaratra 12 na 24 volt an'ny batterie (amin'izao fotoana izao) hampiasa ny volan'ny trano 230 volt (arus ankehitriny). Rehefa miteraka herinaratra ny panneaux solaires dia manao izany amin'ny alàlan'ny mivantana mivantana. Ity seranana ity dia tsy manompo antsika hampiasa azy io amin'ny fitaovana elektrika ao an-trano toy ny fahitalavitra, milina fanasan-damba, lafaoro, sns. Ilaina ny fifandimbiasana ankehitriny miaraka amin'ny herin'ny 230 volt.
Ho fanampin'izay, ny rafitra fanaovan-jiro an-trano iray manontolo dia mitaky fivoarana miova. Ny inverter ankehitriny dia mikarakara izany rehetra izany raha vantany vao nahazo angovo avy amin'ny masoandro ny tontonana masoandro ary voatahiry ao anaty bateriny. Ny inverter ankehitriny dia iray amin'ireo singa mandrafitra ny kitin'ny masoandro Azontsika atao ny manana angovo azo havaozina ao an-tranontsika ary mampihena ny fanjifana angovo fôsily.
Tokony hotadidintsika fa ny fihinanana angovo azo havaozina dia manampy amin'ny fihenan'ny entona entona ao amin'ny habakabaka ary ahafahantsika mandroso amin'ny tetezamita angovo mifototra amin'ny fanaparitahana amin'ny 2050.
Raha ny jiro ilaintsika dia ambany dia ambany ary tsy misy tariby kely, ny fametrahana dia azo atao raha tsy misy mpanodina herinaratra. Hifandray mivantana amin'ilay batterie fotsiny izy io. Amin'izany fomba izany dia hiasa miaraka amin'ny volt 12 ny faribolan'ny herinaratra iray manontolo, nefa takamoa sy fitaovana 12 V ihany no azo ampiasaina.
Inverter inona no tokony hampiasaina?
Rehefa te-hametraka angovo avy amin'ny masoandro ao an-trano isika, dia tsy maintsy fantatsika ireo singa rehetra ilain'ny fametrahana amin'ny asany marina. Misy karazana inverter hery maromaro. Raha hisafidy ny inverter ankehitriny izay mifanaraka indrindra amin'ny toe-javatra misy antsika dia tsy maintsy dinihinao izany ny hery nomena naoty ary ny fahefana tampon'ny inverter.
Ny fahefana kely dia ilay inverter afaka manome mandritra ny fampiasana ara-dalàna. Izany hoe inverter miasa mandritra ny fotoana maharitra sy amin'ny fampisehoana mahazatra. Etsy ankilany, ny hery tampony dia ilay atolotra ankehitriny azonao atolotra anao mandritra ny fotoana fohy kokoa. Ilaina ity herinaratra fara tampony ity rehefa mampiasa fitaovana mandeha amin'ny herinaratra avo lenta isika hanombohana na hampiasana fitaovana matanjaka maromaro miaraka amin'izay.
Mazava ho azy fa raha mandany fotoana be isika amin'ny fangatahana angovo lehibe toy izany dia tsy ho afaka hanome antsika ny angovo ilaintsika ilay mpanova inverter ankehitriny, ary hijanona ho azy io (amin'ny fomba mitovy amin'izany rehefa "mitsambikina ny mpitarika"). Ilaina ny fahafantarana an'io tendrony io rehefa hampiasa fitaovana elektrika toy ny vata fampangatsiahana, vata fampangatsiahana, mixer, milina fanasan-damba, paompin-drano sns. Ary maro amin'izy ireo amin'ny fotoana iray. Koa satria ilaina ireo fitaovana ireo hatramin'ny intelo heny ny hery ara-dalàna an'ny fitaovana elektrika, ilaina ny inverter ankehitriny mba hanomezana antsika hery avo indrindra.
Niova onja sy inverter onja onja
Ireo inverters amin'izao fotoana izao dia tsy ampiasaina afa-tsy amin'ireo fitaovana elektrika tsy misy môtô ary tena tsotra. Ohatra, ho an'ny jiro, fahitalavitra, mpitendry mozika, sns. Ho an'ity karazana angovo ity dia inverter novaina ankehitriny ampiasaina, satria mamokatra arus elektronika izy ireo.
Misy koa ireo inverters onja onja. Ireo dia miteraka onja iray ihany izay raisina ao an-trano. Matetika izy ireo dia lafo kokoa noho ny inverters onja miovaova fa manome antsika fampiasana lava kokoa izy ireo. Azo ampiasaina amin'ny fitaovana misy motera tsotra sy sarotra, fitaovana elektronika sy ny hafa, manolotra fiasa marina sy fampisehoana tena tsara.
Zava-dehibe iray tokony hodinihina amin'ny inverters ankehitriny dia ny tsy maintsy hanajananao mandrakariva ny hery izay azon'ny maodely novidianay omena. raha tsy izany ny inverter dia ho be loatra na tsy handeha araka ny tokony ho izy.
Firy ny mpamatsy vola ilaiko ao an-tranoko?
Mba hahalalanao ny isan'ny mpanodina ankehitriny ilainao dia ilaina ny mahalala ny herinaratra ao amin'ny watts izay tsy maintsy ovain'ny takelakao maso hamaly ny filan'ny herinaratra. Rehefa nikajiana an'io izahay, ny isan'ny watts dia mizara ny hery lehibe indrindra anohanan'ny inverter tsirairay, arakaraka ny karazany.
Ohatra, raha manana herinaratra 950 watts ny fametrahana herinaratra eto amintsika, ary nividy inverters misy ankehitriny hatramin'ny 250 watt isika, mila inverters miisa 4 hahafahana manarona izany fangatahana angovo izany ary afaka manova ny rehetra mivantana namboarina tamin'ny takelaka masoandro ho lasa angovo mifandimby hampiasana ao an-trano.
Ny inverter herinaratra dia manana fari-pitsipika fototra ilaina amin'ny asany. Ireto misy toy izao:
Volavola nominal. Ity ny voltatera izay tsy maintsy apetraka amin'ireo fantsom-pifandraisana ao amin'ny inverter mba tsy ho be loatra.
Hery naoty. Efa voalaza etsy ambony io. Izy io dia ny herin'ny inverter afaka manome azy tsy tapaka (tsy tokony hafangaro amin'ny hery tampony isika).
Fahaiza-manao be loatra. Io no fahafahan'ny inverter manome hery avo kokoa noho ny mahazatra azy alohan'ny be loatra. Misy ifandraisany amin'ny hery tampony. Izany hoe, ny fahafahan'ny inverter mahazaka hery avo kokoa noho ny mahazatra tsy misy be loatra na mandritra ny fotoana fohy.
Waveform. Ny fambara mipoitra eo amin'ny faran'ny inverter no mampiavaka ny endrika onjany sy ny sanda ara-bola mahomby indrindra amin'ny malefaka sy matetika.
Fahombiazana. Mitovy amin'ny fiantsoana azy io hoe fampisehoana nataonao. Izany dia refesina ho isan-jaton'ny herinaratra amin'ny output input sy ny fidirana. Miankina mivantana amin'ny fepetra enti-mitondra ny inverter ity fahombiazana ity. Izany hoe, amin'ny herin'ny totalin'ny fitaovana rehetra ampidirina ary mandany angovo, omen'ny inverter mifandraika amin'ny fahefany. Arakaraky ny hamahanana ny fitaovana avy amin'ny inverter no mampitombo ny fahombiazany.
Amin'ity fampahalalana ity dia ho fantatrao hoe karazana inverter ankehitriny inona no ilainao hamita ny kitanao amin'ny masoandro. Tongasoa eto amin'ny tontolon'ny angovo azo havaozina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo Solar Photovoltaic » Inona ny inverter ankehitriny ary inona no ilana azy?
gong dia hoy izy:
fanazavana fototra azo takarina ho an'ireo tsy manam-pahaizana toa ahy,… ..misaotra betsaka
Mamaly an'i gong
Masinina fanasana ara-tontolo iainana sy tolo-kevitra hanaja ny tontolo iainana
Kitapo amin'ny masoandro